● Modular Design Kwenza Isondlo Quick
● IP65 ngoba sibi ezinomswakama & Sandy Imibandela
● Imithetho ne EMC-B Class Certificate
● High Contrast kwesilinganiselo & Ukuthembeka High
● Front noma engemuva ukuseviswa
● Super Easy Ukufakwa
● engu-2 Isiqinisekiso
Thumela i-imeyili ku-US Landa njenge-PDF
Panther iklanyelwe ngokukhethekile kulabo izinga okusezingeni ongaphandle izimpawu LED edingekayo ukusebenza ngaphansi kwezimo ulwandle sibi ukumelana nomswakama esindayo futhi usawoti. IP65 kokubili ohlangothini front futhi bakhulise akuseyona umqondo kodwa iye kungase kutholakale ukuthi kuyiqiniso futhi uzinzile. Namuhla, fixed ongaphandle isikrini kwaholela kushintshile futhi ukufakwa super lula nge aphansi yesondlo izindleko kuyikhono ngobuchwepheshe singazimisela njalo ukugxila futhi anikezelwe neqhaza Modular kwaholela ukubonisa izixazululo.
-Pixel Pitch 3.9mm 5.21mm 10.41mm
Module / IKhabhinethi Usayizi 500mmx500mm
IKhabhinethi Ukulungiswa 128 × 128 96 × 96 48 × 48
-Pixel Ukucushwa SMD1921 SMD1921 SMD2727
Ukubheka engela 110 ° (H) / 110 ° (V)
Scale Mpunga 65536 amazinga umbala ngamunye
Vuselela Ukukala ≥1920Hz
Min. Ukubuka Ibanga 4M 5m 10m
NW 4.8kg / iKhabhinethi, 26kg / sqr.meter ne-Al. Uhlaka
Wokufaka Amandla (max./avg.) 600/240 Watts sqr.meter ngayinye
Isondlo phambi & isevisi ezingemuva
IP Isilinganiselwa IP65 izimo ulwandle nokhahlo
Aluminm sangaphandle Simple Uzimele
Lokhu Al elula. Uhlaka uyakwazi kwenziwe wena singahlinzeka imidwebo 2D wenzele inkomba yakho. Futhi, ungakwazi ukuthenga kusuka nathi ngqo. Ngokuvamile, kukhona 1mx1m (4.5kg / pc) kanye 0.5mx0.5m (1.5kg / pc) ngoba kukho. It kuncike iphrojekthi enemininingwane futhi ukufakwa imfuneko. Ezinye amakhasimende ungathanda sikhulu omunye lula ukufakwa lula futhi kusheshe, ngakho 1mx1m kuyoba kukho hhayi okubi.
Isiqophi-YouTube ezibonisa indlela ukwenza Front Isondlo kwenzeke ↓
Engemuva Isondlo ↓
Okulandelayo: Goldfish Series – 250x250mm
isicelo Panther sika nezimo kakhulu futhi ahlukahlukene kulawo zemicimbi lapho kukhona okuncane ukufakwa isikhala esisele noma kungekho umnyango emuva sesondlo kanye ukulayisha / ukusekela amakhono alinganiselwe. Khona-ke Panther kuzosiza kakhulu ekuxazululeni izinkinga okubangelwa ezibizayo zabasebenzi Izindleko, ukugcinwa izindleko kanye ukufakwa izindleko. Kunalokho, elula Uhlaka lwensimbi kuyodingeka iphaneli ukukhwezwa phezu kodonga ukhonkolo ngqo ngaphandle uzimele bendabuko ebiyelwe kanye nabo ezintabeni ezimazombezombe.
● Outdoor Ucingo Truck Ngena ngemvume
● yokukhweza Ukukhangisa Ngena ngemvume
● 90 ° Inhlanganisela Isakhiwo Ngena ngemvume
● Uphawu Lwsemgwaqeni noma Roadside LED Billboard
Kwaholela Khombisa Screen Isiqophi Wall Billboard , Seamless Led Video Wall, Led Display Billboard, Indoor Led Video Wall, Waterproof Led Screen, Led Outdoor Advertising Board,